Iponti yeSterling yooVimba-Funda ukuRhweba
I-Pound Sterling Falls njengoko i-UK iphinda iphinda iphinde ithintelwe
Kukho ukuguquguquka okuninzi kwiimarike namhlanje, ngakumbi kwiPound Sterling. Ngenxa ye ukusasazeka kweOmicron, Iponti yehle kakhulu kumarhe okuba urhulumente wase-UK angasebenzisa isicwangciso B kwaye aphumeze imida ethile ngokukhawuleza ngolwesithathu. Nakuba kunjalo, iimvakalelo zaba bhetele.
U-Pfizer ubhengeze ukuba idatha yokuqala yelabhoratri iveze ugonyo lwayo lunokuthi luyenze i-Omicron ingasebenzi emva kweedosi ezintathu. Okwangoku, i-Sterling ihlala iyeyona mali ibuthathaka, ngelixa i-Euro kunye nedola yase-Australia zezona zinamandla.
Amandla okubuyisela imida ye-Covid-19 inobunzima kwiponti, ngokutsho kwezoqoqosho, ifihla imbonakalo yoqoqosho lwase-UK kunye nokulibazisa izicwangciso zokuqinisa imali zeBhanki yaseNgilani. Ngokutsho kwe-Financial Times, iNkulumbuso yase-UK u-Boris Johnson sele eza kubhengeza "Plan B" Izithintelo ze-Covid-19, ezibandakanya imfuneko yeepaspoti zokugonya ukufikelela kwiindawo ezinkulu kunye nesindululo sokusebenza ekhaya, ukucothisa ukusasazeka kwe-Omicron Covid-19 eyahlukileyo.
Ukuqiniswa ngakumbi kwezithintelo, ezinje ngokufuna abantu ukuba basebenze ekhaya, kuya kuphazamisa amathuba ezoqoqosho… (kwaye) kuthetha ukuba iBhanki yaseNgilani kusenokwenzeka ukuba ilinde kude kube nguFebruwari ukuze inyuse amaxabiso.
Amalungu eBhanki yaseNgilani avakalise inqanaba eliphezulu lokuxhalaba malunga nempembelelo enokwenzeka yeentlobo ze-Omicron kwezoqoqosho kunabenzi bomgaqo-nkqubo kwi-Fed kunye ne-ECB. Kwiveki ephelileyo, elinye lawona malungu ebhanki awona makhulu, uMichael Saunders, uthe ukulinda ubungqina obongezelelweyo kutshintsho olutsha, indlela enomonde ngakumbi yokuseta ireyithi iyafuneka.
I-Pound Sterling ihlala i-Fragile, i-GBP / i-USD inokuqhubeka nokuwa kude kube sekupheleni konyaka
IPound Sterling yatshona kwelona nqanaba libi lonyaka xa lithelekiswa nedola yaseMelika, isiya emazantsi okokuqala ukusukela phakathi kuNovemba. Uxinzelelo lokunyuka kwamaxabiso e-United Kingdom lujongela phantsi impembelelo entle yeBhanki yaseNgilani yoqikelelo lokunyuka kwamaxabiso. Isiphelo sangaphambili se-OIS ye-UK ngoku sibonakala sinexabiso elikhuphisanayo kuthi. Nangona kunjalo, ukunyuka kwamaxabiso kwi-Q1 22 kufuneka kujongele phantsi inkxaso yexabiso lokwenyani.
Umthamo we-GBP wokubuyisela kwakhona kwixesha elifutshane uya kulinganiselwa ngokucotha i-GDP kunye neenkxalabo eziqhubekayo malunga ne-EU-UK yezivumelwano zokurhweba emva kwe-Brexit. Amanqanaba aphezulu okufunyanwa kwamanye amazwe kunye notyalo-mali kwii-asethi zase-UK kwixesha elizayo kufuneka zibonelele ngenkxaso engaphantsi kwemali.
Ipound Sterling ifikelela kwiiveki ezintathu ukuphakama njengoko iGDP inyuka
NgoLwesine wabona iponti entle inyusa inzuzo njengoko idola yaseMelika iqhubeka nokuphulukana nomhlaba ngokuchasene nezinye iimali. Ixabiso lokutshintshiselana nge-GBP / USD okwangoku likwi-1.3710, lenyuka ngepesenti ye-0.41 ngosuku. Esi sibini sasifikelele kwi-1.3434, elona nqanaba liphezulu ukusukela nge-24 kaSeptemba.
Idatha ye-GDP ka-Agasti ifike nge-0.4 yeepesenti, eyayiluphuculo olungaphezulu kokufundwa kwenyanga ephelileyo -0.1 yepesenti. Ukulandela ukuphumla kukarhulumente kwimida yokutshixa ngoJulayi, Agasti yayiyinyanga yokuqala epheleleyo ngaphandle kwemida yeCovid-19. Ngokwehla kwamandla emali okungaphezulu kwenjongo yeBhanki yaseNgilani kunye noqoqosho lwase-UK ngaphakathi kweepesenti ezi-0.8 zamanqanaba angaphambi kobhubhane, kukho iingxoxo eziqinisekileyo Ibhanki yaseNgilani ukunyusa inzala ngokukhawuleza.
Nge-Rhuluneli ye-BoE Bailey kunye nelungu le-MPC uSaunders bakhupha izimvo ze-hawkish kwangoko kulenyanga, ibhanki ephambili ichaze ukuba inokunyuka ngokukhawuleza ngaphambi kokuba kulindelwe.
Iimakethi ziye zasabela ngokubhankisha ngenqanaba lokunyuka kwamaxabiso ngaphambi kokuphela konyaka. Oku kuya kuba yimbali, njengoko iBhanki yaseNgilani yayiza kuba yibhanki enkulu yokuqala yokunyuka kwamaxabiso ukususela ekuqhambukeni kokuqala (ukuxolisa kwi-RBNZ, ephakamisa amazinga kwiveki ephelileyo). Kwiiveki nje ezintandathu ezishiyekileyo ngo-2021, abatyali zimali zentengiso bazakubeka esweni ngokusondeleyo ingxelo nganye eyenziwe ngamalungu eBoE xa kusenziwa intlanganiso yomgaqo-nkqubo nge-4 kaNovemba, bekhangela umkhondo wokuba i-BoE ilindele ukwanda nini.
Imizuzu ye-FOMC e-United States iveze ukuba i-Federal Reserve icwangcisa ukunciphisa ukuthenga kwayo nge-Novemba okanye ngo-Disemba. Ngokwimizuzu, iFed iya kunciphisa kancinci i-USD 120 yezigidigidi ngenyanga de inkqubo ipheliswe ngokupheleleyo ngoJulayi ka-2022. E-United States, umkhuhlane weqondo lokufumana i-traction, kunye nexabiso lentengiso kwiqondo lokunyuka ukusuka ngoDisemba 2021 ukuya NgoSeptemba 2022.
Iphawundi eSterling ihlala i-Buoyant, kulandela ukubuthathaka kweDola yaseMelika
I-pound sterling inika izibonelelo ukuya esiphelweni seseshoni yase-US ngoLwesine, isibini esityibilika ngezantsi kwe-1.3700 emva kokufikelela kwiiveki ezintathu eziphakamileyo ze-1.3730. Intambo, kwelinye icala, iyaqhubeka yomelele kwiitshathi zemihla ngemihla, ukurhweba ngaphezulu kwoluhlu lwentengiso yangaphambili kwi-1.3650 / 70.
Iponti inyuke ngexabiso kwezi veki zimbini zidlulileyo njengoko intengiso ilindele ukuba iBhanki yaseNgilane yenzala inyuke kwangoko kulo nyaka uzayo. Ngokunyuka kwamaxabiso kusondela phantse kabini kwinjongo yozinzo lwamaxabiso eBhanki, amagosa eBhanki yaseNgilani axoxa esidlangalaleni malunga nokukhawulezisa isicwangciso sokumiswa kwemali.
Kwelinye icala, idola yaseMelika ithengisa ezantsi ngoLwesine, ngenxa yokutya okuphezulu komngcipheko. Imakethi ayihoyanga ukwehla kwamabango e-US aphelelwe ngumsebenzi, awela ngaphantsi kwe-300,000 okokuqala kwiinyanga ezili-19, njengesiqinisekiso ngoLwesithathu ukuba iFederal Reserve imiselwe ukuqala ukubuyisela umva inkqubo yokuthenga iibhondi kwinyanga ezayo, njengoko kucetyisiwe imizuzu yentlanganiso yokugqibela ye-FOMC, ekhutshwe ngoLwesithathu.
Ipondo eliSterling linyuka njenge-Euro kunye neSwitzerland Franc ukuwa
Iphawundi ethengiswayo okwangoku yimali eyomeleleyo, incediswa ngokuthenga ngokuchasene nezinye iigoriya zaseYurophu. I-Kiwi iyaqina nayo, ilindele ukunyuka kwereyithi ye-RBNZ ngomso, kulandele Idola. I-Swiss Franc, i-Yen, kunye ne-Euro, kwelinye icala, zezemali ezithambileyo. Emva kwesigqibo seRBA esingamangalisiyo kwangoko ngemini, idola yase-Australia ixutywe. Isimo sentengiso sanamhlanje sizolile, kunye nezalathiso zaseYurophu ezirhweba ngokuthe kratya kwaye ikamva lase-US libonisa ukubuyela kwimeko yesiqhelo.
I-Eurozone PPI inyuke nge-1.1% ngenyanga-ngo-Agasti kunye ne-13.4% ngonyaka-ngonyaka. Amaxabiso abavelisi bemizi-mveliso kwishishini lamandla anyuke nge-2.0% ngenyanga-ngenyanga, iimveliso eziphakathi ziphakame nge-1.4% inyanga nenyanga, iimpahla ezinkulu zenyuka nge-0.5% ngenyanga, abathengi bahlala ixesha elingange-0.3% ngenyanga, kwaye Izinto zabathengi ezingagungqiyo zenyuka nge-0.2% ngenyanga-ngenyanga. Amaxabiso eefektri ewonke ngaphandle kwamandla enyuke nge-0.7% ngenyanga-ngenyanga.
I-EU PPI inyuke nge-1.1% ngenyanga-nenyanga kunye ne-13.5% ngonyaka-ngonyaka. IBulgaria (+ 4.2%), iDenmark (+ 3.1%), kunye neLatvia (+ 2.6%) ziye zonyuka kakhulu ngenyanga kumaxabiso abavelisi beshishini, ngelixa i-Ireland (-4.1%) neMalta (-0.1%).
Icandelo lenkonzo ye-Eurozone PMI ye-PMI ekugqibeleni yayiyi-56.4, yehla ukusuka kwi-59.0 ngo-Agasti. Isalathiso sokugqibela se-PMI sokudityaniswa sasiyi-56.2, eyayingaphantsi kwe-59.0 ka-Agasti. Ngokombono wamazwe angamalungu, i-Ireland ye-PMI index edityanisiweyo yaphela nge-61.5, eSpain ngo-57.0, e-Italiya ngo-56.6, eJamani ngo-55.4, nase-France ngo-55.3.
UChris Williamson, uqoqosho oluphambili lwezoqoqosho kwi-IHS Markit, uthe: “Imeko yangoku yezoqoqosho kwi-Eurozone yindibaniselwano engathandekiyo yoxinzelelo lwamaxabiso anyukayo kodwa ekwehlisa ukukhula. Zombini zinxulumene nokunqongophala konikezelo, ngakumbi kwimveliso. Ukwehla kokukhula kwemveliso yayo kukhulu kunecandelo leenkonzo. Indlela yokukhula iye yehla. Ukuzithemba kushishino kwehle kweyona nqanaba lisezantsi ukusukela ngoFebruwari, nto leyo eyonyusa umngcipheko osezantsi wokujonga imeko. ”
Ukufumana iipesenti zePound Sterling kuqikelelo lwexabiso lokunyuka kweBoE
I-pound sterling iye yashukumisa ithoni ye-bearish eyathumela isibini esihla ngasekupheleni kukaSeptemba, njengoko abatyali mali bejikisa ingqalelo yabo kukunqongophala kwamafutha e-UK kunye nezithintelo zonikezelo kunye nolindelo lokuba iBhanki yaseNgilane iya kuba yibhanki yokuqala ephambili yokuphakamisa amaxabiso enzala ukusukela kwintlekele ye-COVID-19.
Isaphulelo esandula ukwenziwa sisilungiso, kwaye isibini kulindeleke ukuba sifakwe kwi-1.3658 / 75 kungekudala. Umndilili weentsuku ezili-13 wokuchazwa kunye nexabiso lokuchasana namaxabiso kwi-1.3658 / 75, ethi yona isengama-caps, ihlale ingumbambano. Ukuvalwa ngaphezulu kweli nqanaba kuya kubonisa ukuba ukubuyela kwimeko yesiqhelo kunokuqhubeka nokuphendula kwangoko kunye nomyinge weentsuku ezingama-55 nge-1.3752 / 75, ebonakala ngathi inzima kakhulu.
Isalathiso Somvelisi Wabathengi base UK Ephakamileyo Kunokuqikelela Kwipound
Ukuvulwa kwakhona koqoqosho lwase-UK ngoJulayi kuxhokonxe ukonyuka kwexabiso lentengo, elonyuke laya kwiipesenti ezi-3.2 ngonyaka kunyaka ka-Agasti, ukusuka kwiipesenti ezi-2.0 ngoJulayi. I-Bhanki yaseNgilani ikhuphele iskripthi seFederal Reserve ngokubanga ukuba ukunyuka kwamaxabiso okukhulu okwethutyana. Kwangoko ngemini, bekukho iindaba ezimnandi ngaphambili kwingqesho e-UK. Kwinyanga yethoba ilandelelana, inani labasebenzi abarhola imivuzo lenyukile, imiqulu yentswela-ngqesho yaqhubeka ukwehla kakhulu, kwaye inqanaba lokungabikho kwemisebenzi lehle laya kwiipesenti ze-4.6, zehla ukusuka kwiipesenti ze-4.9 ngaphambili.
Ngokuqinisekileyo ezi ziindaba ezilungileyo, kodwa hayi ukuya kwinqanaba apho abenzi bomgaqo-nkqubo kwiBhanki yaseNgilane baya kuziva benyanzelekile ukuba banyuse inzala. Ukuba, kwelinye icala, imisebenzi yezoqoqosho iyaphucuka kwaye ukwahluka kweDelta yeCovid kulawulwa, isicwangciso sokulinda seBoE sinokuqwalaselwa kwakhona.
I-CPI ngo-Agasti e-United Kingdom inyuke nge-3.2 yeepesenti ngonyaka ngonyaka, yafikelela kwelona nqanaba liphezulu ukusukela nge-Matshi 2012. Amanani anamandla kunalindelweyo anyusa isikiti, sithetha nje sifumana uninzi loogxa balo be-G10.
Amanani akutshanje okunyuka kwamaxabiso e-UK abonisa ukunyuka koxinzelelo lwexabiso lokunyuka kwamaxabiso olunokubonakala kumazwe aphuhlileyo, kuphakamisa inkxalabo yokuba iibhanki eziphambili kuya kufuneka zibuye umva ngokukhawuleza. Ngeemarike okwangoku zibeka ipesenti ye-82 yokunyuka kwenqanaba le-BoE ngoMeyi 2022, i-sterling kufuneka izuze kwimeko efanelekileyo. Kwi-drive yayo yokulungisa useto lomgaqo-nkqubo, i-BoE ihambile ngakumbi kunezinye iibhanki eziphambili, kwaye onke amehlo akho kwintlanganiso ye-MPC kwiveki ezayo.
Ukunyuka kwamaxabiso e-UK kunyuka, iponti ihlala izinzile
NgoLwesithathu, ikhosi yaseBritane ibuyise ikhosi kwaye ngoku ikwindawo elungileyo. Ixabiso lokutshintshiselana nge-GBP / USD okwangoku likwi-1.3823, inyuke ngepesenti ye-0.15 yosuku. Isibini se-GBP / i-USD sitsalile ukuthenga ngolwesiThathu emva kokubonisa ukomelela okungaphantsi kwenani elijikelezileyo le-1.3800, ukumisa ukuwa ngamandla komhla odlulileyo ukusuka kwelona nqanaba liphezulu ukusukela nge-8 ka-Agasti.
Iponti yaseBritane ixhaswe ngamanani anyukayo aphezulu kunalindelweyo e-United Kingdom. Oku, kudibene nobuthathaka obuqhubekayo bedola yaseMelika, kwanika abaphambili ukuphakamisa okungaphezulu. Endaweni yokwenza imali kusuku olungaphambi kwexesha lokubuya emva kwe-US CPI swing lows, i-USD yayijongane nonikezelo olongezelelekileyo phakathi kokuphazamiseka okuncinci kwentshukumo yokuqala yeFed.
Ithoni ethambileyo ejikeleze isivuno se-Ofisi kaNondyebo wase-US, sidityaniswa novakalelo oluqinisekileyo, sithatha uxinzelelo lwe-deflationary. Oku kubonakaliswe kwithoni ethambileyo ejikeleze isivuno se-Ofisi kaNondyebo wase-US, esidityaniswa nomoya othembekileyo, buthathaka imfuno yedola ekhuselekileyo.
I-Sterling Falls kwiNtengiso yeChoppy, nanjengoko i-Euro idibanisa
Kwiimeko ezingafaniyo, i-sterling ibuthathaka ngakumbi namhlanje. I-Euro ngokufanayo iqinile, incediswa kukubuya kwePound. Idola yase-Australia yeyona ibalaseleyo kuba ibuyisa ilahleko kwiveki ephelileyo. Ukuza kuthi ga ngoku, icala elilinganiselweyo lithintelwe ngaphambi kwesigqibo somgaqo-nkqubo wezemali we-RBA ngomso. I-Franc yaseSwitzerland, ngokuchaseneyo, iyawa ngandlela thile, ibuyisela umva phambili kwiveki ephelileyo.
Ukongeza, ukwehla kwamatyala e-COVID-19 kunye nokuvulwa kwakhona koqoqosho lwase-Bhritane kuncede ukunyuka kweponti kutshanje, kunye nemali ebuyayo kweyona yehle kakhulu kwiinyanga ezilithoba ngoJuni.
Okwangoku, ukugxila kwintengiso kuya kutshintsha kuye Ibhanki yaseNgilani intlanganiso ngoLwesine. I-Bhanki yaseNgilane kulindeleke ukuba igcine ukubambelela ngokuqinileyo kwisiseko sokukhuthaza. Abanye bakholelwa ukuba ibhanki ephambili kufuneka iqale ukuthintela inkqubo yayo yokuthenga iibhondi njengoko uqoqosho luphulukana nalo, becacisa ukubakho kokukhula okukhokelwa ngabathengi okuqhubayo kunye nophuculo olubonakalayo kwiprofayili yokunyuka kwamaxabiso e-UK.
Okwangoku, ukucinga kukuba akuyi kubakho ngcebiso intsha yenqanaba lenzala, kodwa endaweni yokuphindaphinda ulwimi lwangaphambili oluchaza ukuba "Inkqubela phambili enkulu" Iyadingeka ngaphambi kokuba isuswe. Ngamalungu ama-1-2 kuphela anokuthi avote ukuze kupheliswe i-QE kwangethuba kwaye ngaphandle kokuba akukho mmangaliso, ifuthe kwiSterling kufuneka libe lincinci.
Ukuphulukana nokulahleka kweSterling njengeeYurol zidibeneyo
Ekuqaleni kuka-Agasti, isibini esikhulu semali sasihlala sihleli, sinyuke ngokuthobekileyo. I-EURUSD ngoku ithengisa ngaphantsi kwe-1.1870. Imeko yentengiso enobungozi emini kwangoko yenza ukuba kube nzima kwi-greenback ukufumana ibango, encede i-EUR / USD ukuba inyuke.
Nangona kunjalo, emva kwentsimbi yokuvula, izalathiso eziphambili zeWall Street zehlile ukusuka kubusuku bazo, zivumela i-USD ukuba iphinde ibuyele kumandla ayo. I-Index yeDola yaseMelika (i-DXY) ngoku ithengisa nge-92.08.
I-EURUSD igqibile ukwandiswa ukuya kwi-1.1840 kwi-H4. Imakethi ngoku yenze uluhlu lokudityaniswa kweli nqanaba, yaqhekeka kwinqanaba eliphezulu, kwaye yaqhuba ikhonkco lokukhula ukuya kwi-1.1908. Ukuziqhelanisa, eli nqanaba lithathwa njengeyona njongo yolungiso lwasekhaya. Ixabiso lingahle liye kwi-1.1840 namhlanje (uvavanyo oluvela phezulu). Emva koko, ulwakhiwo olutsha lwe-1.1925 luqikelelwa. Ukulungiswa kufuneka kuphele apho, kunye neliza lokwehla ukuya kwi-1.1755 elandelayo.
Iphawundi ye-Sterling Bulls yokuBuyisa uLawulo, njengoko iTrnd yangaphambi kweNtengiso ibuyela umva
Emva kweveki ehlwempuzekileyo, iPound Sterling yaphinda yabuya ngolwesiHlanu, kunye nokugqitywa kwesilayidi seentsuku ezintathu ngekhandlela lehamile elinikezela umqondiso wokuqala wethemba. Ukuvala iveki yokuthengisa, i-UK ibonelele ngedatha, kwaye izinto abatyali mali abanomdla kuzo zazidanisa. Ukukhula kwe-GDP kwehle kwipesenti ze-0.8 ngenyanga ngenyanga kaMeyi, ikakhulu emva kohlaziyo oluhlaziyiweyo lwango-Epreli lwepesenti ye-2.0 kunye noqikelelo lwe-1.0 yeepesenti.
Nangona ukubuyiswa kukhula ngamandla kwaye amanani e-PMI abonisa ukukhula okunamandla kuyo yonke ibhodi, i-GDP iseyi-3% ngaphantsi kwamanqanaba angaphambi kweCovid (ngoFebruwari 2020). Ngaphandle koku, uqoqosho luyaqhubeka ukukhula, kunye nedatha kaMeyi ephawula inyanga yesine elandelelanayo yokukhula.
Sinokulindela ukuba ibango lokuxhotyiswa kwenkululeko likhululwe kwaye uphuhliso lwezoqoqosho lukhuliswe kwi-H2 ka-2021, urhulumente eza kususa yonke imiqobo yeCovid kwiintsuku ezili-10. Nangona kunjalo, amagosa ezempilo alumkisa ngokususa yonke imiqobo yezempilo ngaphambi kwexesha, ngakumbi ngenxa yokunyuka kwamatyala e-Covid delta version e-UK. Ukuba isigqibo sokuvula kwakhona ukubuyela umva kunye nenani lamatyala eCovid anyuka, uqoqosho lunokuvalwa kwiindawo.
Ipound Sterling Kulindeleke ukuba iqhubeke noMkhondo
IPound Sterling (GBP / USD) idibana nonikezelo olongezelelekileyo kufutshane ne-Europe ngolwesiHlanu, inikezela ngaphezulu kweepipi ezingama-50 ukubuyela kwinqanaba le-1.3800. Inkqubo ye- ikhefu, kwelinye icala, wenza ukubuya okumangalisayo ukusuka kwiintsuku ezininzi ze-1.3741, nangona kunjalo, yawa phantsi kwezithintelo ze-1.3900 ngaphambi kokuba abathengisi babuyisele ulawulo.
I-rally-pip rally kwi-cable ilandele ukutshintshwa ngokukhawuleza kwengozi, njengoko izitokisi zehlabathi zanda, ukunciphisa isibheno sedola yase-US njengendawo ekhuselekileyo. Ukulandela ukuthengisa kwangolwesine kwibhodi yonke, abatyali mali babonakala belusongele ecaleni uloyiko lwakutshanje malunga nokwahluka kovimba we-Delta kunye nefuthe layo ekubuyiseleni uqoqosho lwehlabathi.
Okwangoku, ukwanda kwexhala leBrexit, ukunyuka kwamatyala e-UK, kunye nedatha ye-GDP edanisayo ayichaphazelanga iponti, njengoko ukuhamba komngcipheko kuqhubeka nokuba ngumqhubi ophambili wentengiso.
Izilayidi zephawundi xa kuthelekiswa neDollar kunye neYen kwiXhala le-COVID
Iimarike ze-forex zikwimeko ezinzileyo njengoko abathengisi belindele ukubhengezwa kwe-US Nonfarm Payrolls ngolwe-Sihlanu. Isalathiso sedola sonyuke nge-0.21 yeepesenti ukuya kwi-92.06 ngolwe-Lwesibini, ebonisa ukunyuka okuncinci. Ngobusuku nje, iphawundi yawa ngaphantsi kwenqaku le-1.39. Ukuxhalaba malunga nokuvuselelwa kukaCovid eYurophu, e-United Kingdom nase-Asia kunciphise umdla wokutya, okutyhala idola laseMelika ukuba liphezulu kancinci. Ukuba oobhubhani bayanda, iidola zinokufumana umhlaba ongaphezulu.
Ukuza kuthi ga ngoku kule veki, idola kunye ne-yen bezizezomeleleyo imali ngokuthozama. I-S & P 500 kunye ne-NASDAQ zombini zisete iindawo eziphakamileyo ezintsha, kodwa i-DOW ayilandelanga kwaye yaqukumbela usuku olusezantsi. Uninzi lweemarike zaseAsia ngokufanayo kubomvu. Namhlanje, iidola zaseOstreliya naseNew Zealand zibuthathaka kakhulu, nangona iPound isala.
Okwangoku, iSterling ibonakala ngathi ibuthathaka xa kuthelekiswa nedola kunye neYen. Ukophula inkxaso encinci kwi-1.3859 kwi-GBP / USD kunye ne-153.07 kwi-GBP / JPY ingacebisa ukuba iintlanganiso zeveki ephelileyo zigqityiwe.
Kwikhalenda yedatha, iindaba zase-UK zikhawulelwe kwinqanaba leNqanaba 2. Ukubolekwa kwemali kubantu ababodwa kulindeleke ukuba inyuke iye kuthi ga kwi-6.9bn ngoMeyi, inyuke isuka kwi- $ 2.9bn ngaphambili. Ukutsiba okunamandla kuya kubonisa ukwanda kwemisebenzi yezoqoqosho njengoko abathengi beboleka imali-mboleko engaphezulu. I-UK iza kukhupha idatha ye-1Q ye-GDP ngolwe-Lwesithathu, ekulindeleke ukuba ibonise ukucuthwa-isivumelwano -1.5% m / m kunye -6.5% y / y. Olu qikelelo lwesibini kulindeleke ukuba luqinisekise uqikelelo lwantlandlolo oko kuthetha ukuba impendulo yesikiti kufuneka ithulisiwe ukuba uqikelelo alunxaxhi kakhulu kwithagethi.
Ixabiso leDola lonyuka kwakhona kwakhona njengePawundi elibuyayo
Njengokuba isivuno sikaNondyebo siwe kwakhona ngoMvulo, idola yaseMelika ixhaswa ngumbono wokukhula oqoqosho lwaseMelika kunye nothotho oluthile lokuthengisa. Nangona kunjalo, ukwehla kunokwenzeka ngenxa yenyanga- kunye nokuma kokuphela kwekota kunye namaxabiso ayenyuka namhlanje, aqiniswa ngamagama angama-hawkish avela kumagosa e-Fed kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo.
Ngaphandle kokuthelekiswa noontanga bayo baseMelika kunye nabaseSwitzerland, isalathiso sedola senyuka ngaphezulu kwe-92.0 ukuya kwiveki enye, ngelixa i-yen ekhuselekileyo yaseJapan yayiphezulu kakhulu. I-greenback isisiqalo esomeleleyo kule veki, kwaye ukuba idatha ezayo yase-US ayidanisi, inokufumana amandla okomeleza ngakumbi.
Abatyalomali baya kujonga kakhulu iNkomfa yeBhodi yabaThengi yokuThembela kwabathengi kamva namhlanje kunye ne-ISM yokuvelisa i-PMI ngoLwesine ngaphambi kokuba bajonge kulwabiwo-mali lwangoLwesihlanu olungabhaliswanga.
Ukuphakama kweSterling kuyanda emva kweNkcazo yeHawkish yiBhanki yaseNgilani
I-pound sterling inyuke kakhulu namhlanje njengoko amagosa e-Bhanki yase-England ethe thaca kwinqanaba lokunyuka konyaka ozayo. Nangona ixesha elongezelelweyo lifuneka ukuhlalutya umba, iNkulumbuso yase-UK u-Boris Johnson uthe akukho nto kwidatha ebonisa ukulibaziseka kokuvula kwakhona ngoJuni 21. Nangona kunjalo, okwangoku, i-Dola yase-Canada yomelele kakhulu. Ezona mali ziqhuba kakubi, kwelinye icala, yiSwitzerland Franc neYen, njengoko isivuno sonondyebo sikhuphukile. Phambi kweseshoni yase-US, isivuno seminyaka eli-10 sibuyile ngaphezulu kwezibambo eziyi-1.6.
Kwintetho, Ibhanki yaseNgilani Umenzi womgaqo-nkqubo uGertjan Vlieghe wathi imeko yakhe ephambili kuqoqosho "Kancinci kancinci" Kunokuqikelelwa kumbindi we-MPC. "Ukutshintsha kokuhamba kwenqanawa kuthetha ukunyuka okuncinci kwinqanaba lentswela-ngqesho," Uvakalise inkxalabo. Okwangoku, "Ukunyuka kokuqala kweRhafu yeBhanki akunakulindeleka ukuba kufaneleke kude kube ngunyaka olandelayo, ngokuqiniswa kancinci okulandelayo."
Iiponti ezibalaseleyo zineseshoni emnandi, esebenze ngakumbi ngoLwesine ngenxa yogonyo oluqhubekayo kunye nethemba lokubuyiselwa kwezoqoqosho e-UK. Ngexesha leseshoni ephakathi kweMelika, isibini se-GBP / i-USD senyuka saya kwi-100-200 pips kwaye saxhonywa kumhla wokuphakama komhla ongaphezulu kwe-1.4200 kwiyure yokugqibela. Kuya kuba mnandi ukubona ukuba iinkunzi zeenkomo zinokubamba umfutho okanye ukuba isibini se-GBP / USD siyaqhubeka nokusokola ukufezekisa ukwamkelwa ngaphezulu kwenqanaba le-1.4200.
Ukuhla kwePonti ngokuHamba phakathi kokuNcipha kwamaBango ase-US okuQala angenamsebenzi
Ngokwamanani akhutshwe liSebe lezabaSebenzi lase-US (DOL) ngoLwesine, bekukho ama-406,000 amabango okuqala okufumana izibonelelo zokungabikho kwemisebenzi e-US kwiveki ephela ngoMeyi 22. Esi siphumo besiphezulu kunokuba bekulindelwe kwintengiso ye-425,000, kwaye yeza emva amanani angaphambili angama-444,000.
Abadlali beMarike ubukhulu becala abayihoyanga le nkcukacha, kwaye i-US Dollar Index inokuphelisa usuku olungatshintshanga kwi-90.03. Ukubuyiswa kwesalathiso, nangona kunjalo, kulindeleke ukuba kuphile ixesha elifutshane kunikwe imbonakalo yedola yangoku. Kwikota yangoku, nangona kunjalo, ukubuyela umva nzulu kulindelwe, kugxilwe ekujoliswe kuko kwi-YTD ephantsi ngama-89.20.
Ukusuka kumbono wobuchwephesha, i-bias kwi-GBP / USD ihlala i-bullish, kodwa ukucacisa imihla ngemihla ngaphezulu kwe-1.4200 kuyadingeka ukuvula ucango lokuqhubela phambili. Ummandla owawugqityiwe ngaphambili uyaqhubeka nokunciphisa amandla angaphezulu. Kwelinye icala, inkxaso ebalulekileyo kulindeleke ukuba ijikeleze i-1.4100, kwaye ukuvala ngezantsi kweli nqanaba kuya kuthanda ukwehla ukuya kwi-1.4060.
I-Rally ePound iyaqhubeka njengoko i-Euro iyancipha kwiiNkcazo ze-ECB
Ukuhlaziywa: 10 May 2021
Namhlanje, iponti inyuka kabukhali, iyigqitha idola lase-Australia kunye neNew Zealand. Phakathi kwedatha elungileyo kutyalo mali, i-Euro iphantsi koxinzelelo olukhulu lokuthengisa ngokuchasene neponti yaseBritane kunye nedola lase-Australia. Ngokwengxelo ezenziwe yingcali yezoqoqosho eyintloko ye-ECB uPhilip Lane, ibhanki esembindini isavulekile ekunyuseni ukuthengwa kweeasethi kwikota ezayo, kuxhomekeke kwimeko zentengiso.
Ukulandela unyulo lwengingqi kunye nolwasekhaya kwiveki ephelileyo e-United Kingdom, Inkulumbuso yase-UK u-Boris Johnson uqinise ukubamba kwakhe eNgilane, kodwa amabango ereferendamu yenkululeko yase-Scottish yomelele. Iponti iyatyhileka phakathi kweScottish National Party isilela ukufumana uninzi kwiPalamente yaseScotland, kunye neeJonssonatives zikaJohnson ezibaleka kumanyundululu amva nje athe ashukumisa umbutho.
Nangona kunjalo, umlo phakathi kwe-Holyrood ne-Westminster uqalile nje, kwaye ngelixa u-sterling enokufumana inkxaso ethe kratya ngolwesiThathu ukuba idatha ye-Q1 GDP ayinabungozi kakhulu, imingcipheko yezopolitiko isekhona. I-Boris ifumana imvume eNgilane, kodwa iingxaki ziyaqala eScotland.
Isibini se-GBP / USD sibonise iinzuzo ezomeleleyo kwisiqingatha sesibini seveki ephelileyo kwaye sigcina amandla aso ngoMvulo. Emva kokuchukumisa amanqanaba aphezulu ukusukela ekupheleni kukaFebruwari e-1.4158 kwangoko kwiseshoni yase-US ngoMvulo, esi sibini kubonakala ngathi singene kwisigaba sokudityaniswa, kwaye kutsha nje sihlanganisile i-1.2% ngomhla ukuya kwi-1.3143.
Ukuhla kwe-Euro kwiiNgxelo ze-ECB
Kudliwanondlebe noLe Monde, u-economist oyintloko we-ECB uPhilip Lane utshilo "Ukusukela ngoku, uqoqosho luzokhula ngokukhawuleza, kodwa ukusuka kwinqanaba eliphakathi." I-Eurozone iya kubuyela kuphela kwinqanaba le-2019 ye-GDP “Malunga nexesha elifanayo kunyaka olandelayo”. Izinga lokungabikho kwemisebenzi liya kubuyela kwinqanaba le-2019 kuphela "ngo-2023". Ngenxa yoko, “Luhambo olude” kusafuna oko "Rhoqo" iinzame zezemali nezemali.
U-Lane ukwathe ngaphandle kokunyuka kwesivuno kwiibhondi ezithile ze-euro, bona “Hlala usezantsi kwaye uzinzile.” Ukuqinisekisile ukuzibophelela kwe-ECB "Sigcine imeko entle yezemali." The “Kakhulu” Inqanaba eliphezulu lokuthengwa kweeasethi elibhengezwe ngo-Matshi liza kuqhubeka kwiiveki ezizayo. Isantya sokuthenga siya kuphononongwa kwintlanganiso kaJuni. Wongeze wathi: "Singanyusa okanye sinciphise ukuthenga kwethu njengoko kufuneka ukugcina imeko yezemali intle."
Ireyithi yokutshintshiselana ye-EUR / USD inyuke yaya kwi-1.2176, inqanaba eliphezulu ukusukela ngoFebruwari, kwaye yagqityelwa ukubonwa ijikeleza malunga ne-1.2160. Ngelixa isibini sihlala sinyusa, kulindelwe ukwehla kokulungiswa. Inqanaba lenkxaso kwangoko likwi-1.2149, ngekhefu elingezantsi ukuveza indawo ye-1.2100 / 10.
tags Euro, I-European Central Bank (ECB), Pound Sterling
I-Bhanki yaseNgilani ilindele ukuba uqoqosho lukhule ngexabiso elikhawulezayo
I-Bhanki yaseNgilani ivote ngazwi linye namhlanje ukugcina ireyithi yeBhanki kwiipesenti ezi-0.1, irekhodi eliphantsi. Ibhanki esembindini, kwelinye icala, ivotele i-8-1 ukugcina inkqubo yokuthengwa kweeasethi kwi-895 yezigidigidi zeepawundi, ine-875 yezigidi zeepawundi kwizibophelelo zikarhulumente.
Ukuthengwa kweeasethi kuyacothiswa ukuze iprojekthi igqitywe ukuphela konyaka, ngokutsho kwabenzi bomgaqo-nkqubo. Ifika kwangoko kunokuba bekulindelwe. Abasebenzi bahlaziye uqikelelo lwenqanaba lokungabikho kwemisebenzi olusezantsi kunye nohlaziyo lwamanani okukhula kwe-GDP ngokwezoqoqosho. NgoLwesine, iBhanki yaseNgilani ityhile ukuba ngoku ilindele ukuba iMveliso yaseKhaya eNkulu yase-UK ikhule nge-7.5 yeepesenti ngo-2021, inyuke isuka kwi-5% kwingqikelelo yayo kaFebruwari.
Isibini se-GBP / USD sakhwela ii-85 iipips emva kokuba iBhanki yaseNgilani ikhuphe ingxelo yayo yemigaqo-nkqubo yezemali, ilungisa ukuwa kwe-1.3855. I-MPC yeBhanki yaseNgilani ivote ngazwinye ukugcina umlinganiso wenzala kwi-0.10 yeepesenti kunye neZibonelelo zokuThenga iiasethi kwi-875 yezigidi zeerandi, njengoko bekulindelwe. Isigqibo besilindelwe, kodwa ukunqongophala kokucaca kwezicwangciso zokucoca kwikamva kubunzima kwisikiti saseBritane.
Ukubuyisa kwakhona kwe-GBP / ye-USD kumaZiko akutshanje, axhaswe yi-Weaker US Dollar
I-GBP / i-USD yawela kwindawo ephantsi ye-1.3860, apho yafumana inkxaso kwaye yaya kwi-1.3900. Ngelixa imarike isesebomvu kolu suku, imeko esezantsi iya incipha njengoko idola yaseMelika iqhubeka nokuba buthathaka kwibhodi yonke.
Iponti yenye yezona zinto zenze kakubi kwiimarike zangoLwesine, ezachukunyiswa yiseshoni yeBhanki yaseNgilani. Ibhanki esembindini igcine umgaqo-nkqubo wezemali ucocekile, njengoko bekuxelwe kwangaphambili, kwaye yabhengeza ukuncitshiswa kokuthengwa kweveki nganye "Akufuneki ibonwe njengokutshintsha kwemo yemigaqo-nkqubo yemali."
Ukuhla kwedola kulindeleke ukuba kuhlale ubuncinci ezinye iinyanga ezintathu. Isalathiso sedola (i-DXY) - ebalwe ngokuchasene nebhasikithi yeemali ezinkulu ezintandathu- yehle ngaphezulu kwe-2% ngo-Epreli, esona siphumo sibi kwiinyanga ezine, emva kokunyuka phantse ngeepesenti ezi-4 kwikota yokuqala, ukuqala kwayo okungcono kwiminyaka.
tags IBhanki yaseNgilani (BoE), Pound Sterling